एक्सेल डेभलपमेण्ट बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर एक्सेल डेभलपमेण्ट बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण
मुख्य खबर, लगानी 74 views
एक्सेल डेभलपमेण्ट बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण
बैङ्कको आव ०७४/७५ को दास्रोे त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार रू. ७ करोड ५१ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा न्यून प्रतिशतले बढी हो । दोस्रो त्रैमासमा बैङ्कको चुक्तापूँजी १ सय २५ प्रतिशतले बढेर रू. ६९ करोड २६ लाख पुगेको छ । २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी र ३० दशमलव ९२ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेपछि पूँजी बढेको हो । बैङ्कले रिजर्भ कोषमा रू. १८ करोड ६८ लाख छुट्याएको छ । बैङ्कले पुस मसान्तसम्ममा रू. १ करोड ७४ लाख खराब कर्जा उठाउन सफल भएको छ । सोही कारण निष्क्रिय कर्जा शून्य ८६ प्रतिशत रहेको छ । साथै बैङ्कले चैत २३ गते विशेष साधारण सभा समपन्न गरेको छ । उक्त साधारण सभामा तीन जिल्लामा रहेको कार्यक्षेत्रलाई बढाएर पाँच जिल्लामा पु¥याउने प्र्रस्ताव पारित गरेको छ ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. ३४१
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. ८९५
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू. ३२०
१८० दिनको भारित औषत व्यापार मूल्यः रू. ४१४.६४
अध्यक्षः हेमराज ढकाल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः दिनेश कुमार पोखरेल
प्रधान कार्यालयः विर्तामोड, झापा
स्टक स्टिकरः ईडीबीएल
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा २४ दशमलव ०१ प्रतिशतबाट घटेर १० दशमलव ८४ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । हाल बैङ्कको लगानी रू. ६ करोड ८५ लाख रहेको छ ।
बैङ्कले पुस मसान्तसम्ममा रू. ४ अर्ब ४८ करोड निक्षेप सङ्कलन गरी रू. ४ अर्ब ४ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी रू. १५ करोड १० लाख, कर्मचारी खर्च रू. २ करोड ९९ लाख, अन्य सञ्चालन खर्च रू. २ करोड २४ लाख र सञ्चालन नाफा रू. ९ करोड ५४ लाख रहेको छ ।
बैङ्कको स्थिर सम्पत्ति १७ प्रतिशतले बढेर रू. ५ करोड २७ लाख १९ हजार र अन्य सम्पत्ति ४ प्रतिशतले बढेर रू. १६ करोड २० लाख २५ हजार रहेको छ ।
बैङ्कले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. १ करोड १९ लाख छुट्याएको छ । पूँजीकोष लागत ५ दशमलव ४५ प्रतिशत र पूँजीकोष पर्याप्तता १७ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ ।
चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार बैङ्कको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक रू. २१ दशमलव ६९, मूल्य आम्दानी अनुपात(वार्षिक) १७ दशमलव ७५, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. ८ सय १ दशमलव ७४, तरलता अनुपात २७ दशमलव २५ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय २६ दशमलव ९७ रहेको छ । आइतवारको शेयर मूल्य नेटवर्थको साढे २ गुणा बढी छ ।
खरीद चापः बैङ्कको आइतवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापको तुलनामा खरीद १ गुणा बढी रहेको छ । सो अवधिसम्म २ हजार १ सय ५० कित्ता शेयर खरीद र २ हजार १ सय १ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
७ जनवरी २०१८ ८ अप्रिल २०१८
मैनबत्ती विश्लेषणः बैङ्कको ५३ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा सुटिङ स्टार आकृती बनेको छ । यस्तो आकृतीले शेयर मुल्य वियरिश प्याटर्नमा रिभर्स हुने सङ्केत देखाँउछ । यसको विश्वसनियता भने सामान्य रहेको छ ।
आरएसआईः बैङकको ५३ दिनको कारोबारमा आरएसआइ न्यूट्रल जोन (४७ दशमलव ९४ स्केल)मा छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः बैङ्कको ५३ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन ४ दशमलव ८० विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको छ ।
मुभिङ एभरेजः बैङ्कको ५३ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य, १४ दिने औसत मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्यरेखाको बिचमा छ । हालको मूल्य रू. ३ सय ४१ बाट बजारको अवस्था परिवर्तन भई सस्तिएमा रू. ३ सय ३५ मा टेवा पाउन सक्छ भने मूल्य महङ्गिएमा रू. ३ सय ५८ मा प्रतिरोध पाउन सक्छ ।